FML nguKhan West - Izinto Zobugcisa
FML nguKhan West
U-Kanye West ujongene nomzabalazo wangaphakathi wokuziphatha kule ndlela ibonakalisayo, njengoko evakalisa umnqweno wokutshintsha iindlela zakhe kwaye ahlale ethembekile kumfazi wakhe, uKim. Uqala ingoma ngokudlwengula:
Ke andinakuyibeka emngciphekweni enye yezi gaba
Ngokwesiqhelo 'i-FML' sisichazi esithi 'F- Ubomi bam, kodwa umgca wesibini wengoma utyhila ukuba, kulo mzekelo, umele' uMama wam. '
Impelaveki ibetha umlobothi, usebenzisa intsingiselo esemgangathweni e-R 'ye-FML.' I-Canada idume ngokugcina isondo kunye neziyobisi kwaye ibhekisa kwabo babemthiyile apha engabaxeleli mntu kodwa yena unelungelo lokugxeka indlela yakhe yokuphila eyonakalisayo.
U-Kanye West wabhala le ngoma kunye nomlingane wakhe oqhelekileyo uMike Dean. Abavelisi badweliswe njengo:
UMitus, ezinye iikhredithi zakhe zibandakanya 'uJames Joint' kwiRihanna I-ANTI .
Umvelisi osekwe e-Atlanta uMetro Boomin osebenza rhoqo kwiKamva. Ubuye wenza iingoma ezisixhenxe kuDrake nakwiKamva Leliphi Ixesha Lokuphila .
Injineli kaKanye West uNowa Goldstein. Wayesebenza nakwii-albhamu zomculo zeGOOD NguYesu kwaye Ubumnandi obumnyama obuGqwesileyo kunye neprojekthi yakhe edibeneyo noJay-Z, Bukela iTrone .
Umvelisi waseScotland u-Hudson Mohawke, otyikitywe kwi-Kanye West's Very GOOD Ukubetha. Uye wanceda nokwenza isandi esibonakalayo kwisibini NguYesu iingoma, 'NdinguThixo' kunye 'Igazi Amagqabi.'
Umsebenzi wexesha elide waseNtshona u-Andrew Dawson, oqale wasebenzela umlobi waseChicago njengenjineli kwi-2004 yakhe yokuqala Ukuyeka isikolo eKholejini icwecwe.
I-outro 'FML' ivela kwiCandelo lama-25 elithi 'Hit.' Icandelo lama-25 yayiliqela lesiNgesi elalisaziwa ngokungaziwayo; Ingoma ibonakale njengengoma yesixhenxe kwi-albhamu yabo yokuqala ka-1981, Njalo ngoku .
uvuyo kwihlabathi ingoma
ndirhubuluza ndibuyela kuwe iinkawu zearctic iingoma
yaqala ngo kiss yaphela kanjani lento
indlu yokuphuma kwelanga inentsingiselo
Indlela yobomi yenombolo 7 uthando
thetha ukuthetha - bubomi bam